Energizer Power Max P18K Pop: telefaona misy bateria 18.000 mAh | Androidsis
Energizer Power Max P18K Pop: Ny smartphone miaraka amin'ny bateria 18.000 mAh
Eder Ferreno | | Fitaovana Android, Finday
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia voamarina fa tsy ho ela dia hanolotra smartphone i Energizer Bateria 18.000 mAh. Na dia antenaina aza hoy izany ny fampisehoana dia natao tao amin'ny MWC 2019. Raha ny tena izy, ny marika dia manana drafitra lehibe amin'ny hetsika telephony any Barcelona. Satria antenaina izy ireo ampahafantaro finday vaovao 26 vaovao amin'ny hetsika. Betsaka ny vaovao andrasana aminao.
Fa ny fahafantarana ny smartphone 18.000 mAh an'ny orinasa dia tsy mila miandry ela loatra isika. Hatramin'ity Energizer Power Max P18K Pop dia nambara tamin'ny fomba ofisialy. Tsy misy isalasalana, finday avo lenta niantso ho gaga. Satria io no maodely misy batterie lehibe indrindra eny an-tsena ankehitriny.
Ity maodely ity dia manatevin-daharana ireo faritra naseho herinandro mahery lasa izay. Ny tena mampiavaka ny Energizer Power Max P18K Pop dia ny bateria lehibe. Saingy tsy ny zavatra ihany no misarika ny saina ho amin'izany. Koa satria ilay fitaovana dia miaraka amin'ny hoy fakantsary azo esorina, izay tsy isalasalana fa fironana hafa amin'ity taona ity.
Famaritana Energizer Power Max P18K Pop
Ny fitaovana dia haseho amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny MWC 2019. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia efa manana ny ampahan'ny famaritana azy isika, amin'izay afaka mahazo hevitra mazava momba ny zavatra antenaina amin'ity fitaovana ity isika. Ka efa fantatsika izay antenaina amin'ity Energizer Power Max P18K Pop ity amin'ny hetsika any Barcelona amin'ny faran'ny volana. Azontsika atao ny manantena antonony tsara amin'ity lafiny ity:
efijery: 6,2 santimetatra misy famahana HD
Fakan-tsary Rear: 12 MP + 5 MP + 2 MP
Fakan-tsary eo aloha: MP 16 + 2
bateria: 18.000 mAh
Tsy misy isalasalana, finday avo lenta mahagaga amin'ny lafiny famaritana. Satria mahatratra ny afovoany, fa miaraka amina andian-doza, nefa fanapahan-kevitra mahaliana avy amin'ny Energizer. Amin'ny lafiny iray, ny orinasa dia nisafidy efijery lehibe, misy zana-kazo tena manify, saika tsy misy. Na dia tsy misy lavaka na notch eo amin'ny efijery aza izy io. Zavatra izay tena ho tian'ny mpampiasa. Azo esorina ny fakantsary eo aloha
Efa fantatra fa ny marika dia miloka amin'ity rafitra ity amin'ny maodely sasany. Fantatsika izao ity Energizer Power Max P18K Pop izay tonga miaraka amin'ilay fakantsary voalaza io. Izy io koa dia fakan-tsary indroa, 16 + 2 MP. Andrasana araka izany ny fahaizan'izy ireo manao selfie tena tsara miaraka aminy. Mbola tsy afaka nahita ny rafitra miasa izahay. Tsy maintsy miandry ny MWC 2019 isika vao hahita ny fomba nampidirana ilay rafitra tao amin'ilay fitaovana.
Ity Energizer Power Max P18K Pop ity koa dia mamela antsika tsy ampoizina any aoriana. Satria miaraka amina fakantsary telo ny fitaovana. Hitanay ny fahamaroan'ny fakantsary marobe tao amin'ny elanelam-potoana. Fakan-tsary 12 + 5 + 2 MP sasany, izay tsy isalasalana fa mampanantena ny handeha tsara. Andrasana ihany koa ny fisian'ny fisian-tsaina artifisialy ao amin'izy ireo.
Zavatra hahagaga anay, satria ny smartphone dia miaraka amina processeur Helio P70. Mpikirakira MediaTek ho an'ny elanelam-potoana, fa izany dia mampiasa kokoa ny faharanitan-tsaina artifisialy. Izy io dia miaraka amin'ny RAM 6 GB sy tahiry anatiny 128 GB. Fifangaroana tsara, izay tsy isalasalana fa manome hery ampy anao amin'ny fotoana rehetra.
Na izany aza, tsy afaka nanadino ny amponga nataony izahay. Io no teboka mahery amin'ity Energizer Power Max P18K Pop ity. Batterie manana fahaiza-miaina 18.000 mAh, izay ny maodely Android misy bateria lehibe indrindra eny an-tsena ankehitriny. Voamarina fa ho avy miaraka izy io fiampangana haingana, modely iray hafa amin'ny fananana an'ity haitao ity. Tsy fantatray izay karazana fiampangana haingana entin'ity maodely ity. Noho ity bateria ity dia afaka miresaka 90 ora ianao, mihaino mozika 100 ora eo ho eo ary mijery horonantsary mandritra ny roa andro tsy misy fiatoana. Raha jerena ny marika dia azo alefa hatramin'ny 50 andro.
Amin'ny MWC 2019 dia hahafantatra bebe kokoa momba izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Energizer Power Max P18K Pop: Ny smartphone miaraka amin'ny bateria 18.000 mAh
Lemeng Mobile: marika vaovao an'ny Lenovo